Muxuu Trump dib oogu dhigay jeedinta khudbadda qaranka Mareykanka? – AwKutub News
Muxuu Trump dib oogu dhigay jeedinta khudbadda qaranka Mareykanka?
By awkutubnews January 24, 2019
Leave a Comment on Muxuu Trump dib oogu dhigay jeedinta khudbadda qaranka Mareykanka?
“Ma raadinayo meel kale oo aan khudbadda ka jeediyo, sababta oo ah ma jiro masrax u dhigma taariikhda, dhaqanka iyo muhiimadda Aqalka Wakiilada” ayuu yiri Trump oo qoraal soo dhigay twitter-ka arbacadii.
Goor sii horeysay, saraakiil ka tirsan Aqalka Cad ayaa sheegay inuu socday qorshe uu madaxweynaha doonayey inuu khudbadda ka jeediyo goob kale, oo aan ahayn Aqalka Wakiilada.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sanad kasta waxaa laga doonayaa inuu congress-ka u gudbiyo warbixinta xaaladda waddanka, hase yeeshee ma jiro wax qasbaya inuu ka hor jeediyo labada Aqal ee sharci-dejinta.
Afhayeenka Congress-ka, Nancy Pelosi ayaa ku boorisay Trump inuu dib u dhigo khudbaddiisa inta laga xalinayo muranka ka taagan xirnaanshaha dowladda, ama uu qoraal ahaan ugu soo gudbiyo sharci-dejiyayaasha.
Tags: Aqalka Cad Caalamka Khudbad Maraykanka Trump Wararka
Previous Entry Zimbabwe : Madaxweyne Mnangagwa oo si degdeg ah dalkiisa ugu soo laabtay
Next Entry Itoobiya oo sanadka soo socda martigalin doonta shirka dhaqaalaha adduunka